Global Voices teny Malagasy » Fitaovana Breziliana Hamoretana Ny Mpanao Fihetsiketsehana Any Amin’ny Firenena Arabo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jona 2013 5:44 GMT 1	 · Mpanoratra Pública - Agência de jornalismo investigativo Nandika (fr) i Henri Dumoulin, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Bahrain, Brezila, Emirà Arabo Mitambatra, Tiorkia, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Ity lahatsoratra nosoratan'i Bruno Fonseca sy Natalia Viana, avy amin'i Agência Pública, ity dia nivoaka tamin'ny voalohany tamin'ny lohateny hoe “Bomba brasileira na pele turca”  (grenady breziliana hamelezana ny Tiorka) , izy ity dia ao anatin'ny fanadihadiana manokana momba ireo vondron'olona mpanery ny manampahefana sy ny orinasa mpamokatra fitaovam-piadiana ao Brezila #IndústriaBrasileiraDeArmas . Hisy lahatsoratra telo momba izany fanadihadiana izany eto amin'ny Global Voices Online. Ity ny lahatsoratra farany.
Jereo ny lahatsoratra teo aloha : Grenady Breziliana Hamelezana Tiorka  sy Brezila Goavana iray vaovao eo amin'ny sehatry ny Fitaovam-piadiana tsy mahafaty  [mg]
Raha hinoan-teny ny sampana mifandray amin'ny mpampahalala vaovao ao aminy dia ny Condor irery ihany ny orinasa breziliana mivarotra fitaovam-piadiana amin'ny fitondrana Tiorka. Ankoatra ny bala mahatody lavitra sy ny grenady “mandihy”, dia mivarotra tsifitra gazy mandatsa-dranomaso sy misy dipoavatra, baomba mitera-tsetroka, bala fingotra ary poleta mandeha amin'ny herinaratra tsy ahafahan'izay tratrany mikofoka fantatra amin'ny anarany hoe “tasers” ihany koa ny Condor. Tamin'ny 2011 dia nohamafisiny ny fivarotana fitaovam-piadiana mankany amin'ny firenena Arabo nefa laviny ny fivarotana izany mivantana nankany Barhaïn. Hita ao anatin'ny mpanjifany kosa ny fitondrana ao Emirà Arabo Mitambatra izay nandeha ny andia-tafiny nankany Bahraïn.
Tamin'ny volana avrily tamin'ity taona ity dia nanasonia fifanaraham-barotra taranjam-bala tsy mahafaty miisa 600 000 mitentina 12 tapitrisa dolara tamin'ny fitondrana Emirà ny Condor. Nolazaina tamin'ny vahoaka nandritra ny fampirantiana iraisampirenena momba ny fiarovana sy ny fitandroam-pilaminana ( LAAD) tao Rio de Janeiro izany.
Tsy ampy iray volana nialoha ny rotaka tao Torkia, nikarakara fihaonan'ireo orinasam-panamboaram-piadiana tamin'ireo mpividy vahiny avy any Istanbul ny fitondrana breziliana. Nandritra ny fampirantiana iraisampirenena momba ny fiarovana IDEF 2013, ny 7 ka hatramin'ny 10 mey, no nitazona tranoheva mamirapiratra tao amin'ny Fanevan'i Brezila ny sampan-draharaha breziliana misahana ny fampiroboroboana ny fanondranana sy ny fampiasam-bola (Apex Brasil) sy ny fikambanan'ny orinasa breziliana misahana ny fitaovam-piarovana sy ny fitandroam-pilaminana (Abimde), ka ao anatin'izany ny filoha lefitra Carlos Frederico Queiroz de Aguiar, izay filohan'ny Condor.
Ao amin'ny faritra natokana ho an'ny Condor, ahitana tora-javatra metalika isan-karazany, grenady sy kapoakan-tsifitra mitovy amin'izay nampiasaina, roa herinandro taty aoriana, teny an-dalamben'io firenena io ihany. Eo ambanin'ny anaran'ny orinasa no aranty ihany koa ireo greandy “mandihy” sy ireo “karazana isafidianana hiarovan-tena” (araka ny fomba fitenin'io orinasa io) tahaka ireo karazana kojakojam-piadiana tsy mampikofoka 13 karazana de 40/46mm ho an'ireo mpitoraka.
Tranohean'ny Condor ao amin'ny faneva breziliana tany Torkia tamin'ny mey 2013. Misy ny Fitaovam-piadiana naranty teto no hampiasaina namelezana ny vahoaka iray volana taty aoriana. /Sampam-baovaom-Panjakana/lisansa Creative Commons
Tamin'ny fanontaniana mifandraika tamin'ny fepetra manokana nomena ny Condor sy ny orinasa Breziliana hafa ho any Torkia, tsy namaly ny Apex tamin'ny fotoana nivoahan'ity voka-panadihadiana ity. Araka ny gazety tiorka Sozcu, dia nanambara, hono, ny minisitry ny varotra Hayati Yazici fa tao anatin'ny 12 taona farany, dia nanafatra baomba mandatsa-dranomaso sy tsifitra dipoavatra 628 taonina avy any Brezila sy Etazonia mitentina 21 tapitrisa dolara ny firenena.
Tamin'ny volana febroary tamin'ity taona ity dia nandray anjara tamin'ny foaram-pitaovam-piadiana hafa notontosaina tany Abou Dhabi any Emirà Arabo Mitambatra ny Abimde. Mpandray anjara tokana teo amin'ny famokarana fitaovam-piadiana tsy mahafaty tamin'ny anaran'i Brezila ny Condor.
Mampanontany tena ao Brezila ao ny fampiasana fitaovam-piadiana tsy mahafaty
Nanao sonia momba ny fifanekena ara-barotra fitaovam-piadiana (ATT amin'ny teny anglisy) teo anatrehan'ny Firenena Mikambana i Brezila tamin'ny 3 jona teo. Hita ao amin'io dina io izay mikendry ny hanafoanana ny fivarotana fitaovam-piadiana handripaham-bahoaka, hampihorohoroana na ny fikambanan-jiolahy iraisampirenena, “tokony asiana fepetra manaraka mason-tsivana ahitana mangarahara kokoa eo amin'ny fampitana azy ny fivarotana fitaovam-piadiana manara-penitra”.
Fomba fihetsika vaovao izany natao izany ho an'ity firenena midify ny mangarahara ity raha eo amin'ny fivarotana fitaovam-piadiana breziliana… Nandà ny hanome ny anaran'ireo orinasa manondrana fitaovam-piadiana ny minisitry ny fampandrosoana ny indostria sy ny varotra ivelany (marina fa tsy voalazan'ny dina ny fepetra manokana momba ny fivarotana fitaovam-piadiana tsy mahafaty).
Mandà ny hamoaka ny lisitry ny orinasa breziliana manondrana fitaovam-piadiana ny minisitry ny fampandrosoana ny andostria sy ny varotra ivelany/Sampam-baovaom-panjakana/ sary nampiasaina noho ny lisansa Creative Commons
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/24/49583/
 Grenady Breziliana Hamelezana Tiorka: https://fr.globalvoicesonline.org/2013/06/11/148069/
 Brezila Goavana iray vaovao eo amin'ny sehatry ny Fitaovam-piadiana tsy mahafaty: https://mg.globalvoicesonline.org/2013/06/20/49453/
 sampana mifandray amin'ny mpampahalala vaovao : http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-06-04/policia-turca-usa-gas-lacrimogenio-brasileiro-contra-manifestantes-diz-anistia-internacional